जिजीविषा: Tricks in computer
Internet Explorer को Title चेन्ज गर्ने तरिका
१ Start > Run > र त्यहाँ gpedit.msc टाईप गर्नुहोस् ।
२ त्यहाँ user configuration > Windows Settings > Internet Explorer Maintainance > Browser User Interface र Browser Title लाई Double क्लिक गर्नुहोस् ।
३ Costomize Title Bars लाई Activate गर्नुहोस् र title Bar Text मा केही टाईप गर्नुहोस् , जे टाईप गर्नु भए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन जस्तै : Kathmandu टाईप गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस् ।
४ अब gpedit.msc लाई बन्द गरी दिनुहोस् ।
५ फेरी Start > Run > र त्यहा टाईप गर्नुहोस् regedit
६ HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Internet Explorer\_Main सम्म जानुहोस् ।
७ अब दाँया तिर Window Title कि खोज्नुहोस् र त्यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यहा तपाईंले Value Data मा Microsoft Internet Explorer Provided bt Kathmandu लेखेको पाउनु हुनेछ ।
८ अब त्यसलाई मेटेर तपाईंलाई के लेख्न मन छ त्यो लेख्नुहोस् , यहाँ तपाईंले जे लेख्नु हुन्छ त्यो तपाईंको Internet Explorer को title bar मा display हुन्छ ।
९ अब regedit लाई बन्द गरिदिनुहोस् ।
१० अब Internet Explorer खोलेर हेर्नुहोस् ...
WinXp security : यदि तपाईंले step १ देखी ३ सम्म गर्नु भएन भने तपाईंले Window Title कि भेट्टाउन सक्नु हुन्न ।
गूगलमा एक्छिन रमाइलो गर्ने कि ?
यो एउटा पुरानो trick हो तर धेरै साथीहरुलाई थाहा छैन होला । त्यसैले एक चोटि ट्राइ गरेर गेरौ न त है
१ Internet Explorer खोल्नुहोस् र त्यहा टाईप गर्नुहोस् http://www.google.com
२ Images मा क्लिक गर्नुहोस् र search गर्नुहोस् bikes,flowers,cars इत्यादी ।
३ अब तपाईंले सर्च गर्नु भएको pitrute Thumbnailed मा आएको देख्नु हुनेछ ।
४ अब URL Address Bar लाई highlight गरी Delete गरिदिनुहोस् र तल दिईएको Script लाई कपि गरेर त्यहा पेस्ट गरिदिनुहोस् र Enter हान्नुहोस् ।
५ Effect हेरेर एकछिन रमाइलो गर्नुहोस् ....
तपाईंले तल दिईएको कुनै पनि नामको फोल्डर बनाउन सक्नु हुन्न
सक्नु हुन्छ ? एक चोटि ट्राइ गरेर हेर्नुहोस् न त अब तपाईंले आफ्नो साथीहरुलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् कि तपाईंले माथि उल्लेखित नामको फोल्डर बनाएर देखाउनु हुन्छ ।
तरिका सजिलो छ
१ कुनै नयाँ फोल्डर बनाउनु होस्
२ अब उक्त फोल्डरलाई Right क्लिक गर्नुहोस् र rename गर्नुहोस्
३ rename गर्दा Num Luck on गर्नुहोस् र Alt कि press गरेर 255 लेख्नुहोस्
४ अब माथि लेखिएका कुनै नाम टाईप गर्नुहोस्
अघि बनाउन नसकेको माथि उल्लेखित कुनै पनि नामको फोल्डर अहिले बनाउन सक्नु भयो नि । साथीहरु माझ स्मार्ट बन्ने हैन त अब ???
१ तपाईंले कुनै टेक्स्ट लाई Ctrl+C प्रयोग गरेर कपि गर्नुहोस्
२ अब यो लिन्क लाई क्लिक गर्नुहोस् http://www.sourcecodesworld.com/special/clipboard.asp
YouTube को भिडियो डाउनलोड गर्ने एउटा सजिलो उपाय
YouTube को भिडियो डाउनलोड गर्ने एउटा सजिलो उपाय मैले भेट्टाएको छु , यो उपाय अरु भन्दा एकदम रमाइलो र सजिलो छ । यो तरिका प्रयोग गरेर तपाईंहरुले भिडियो लाई mp4 फरम्याटमा डाउनलोड गर्न सक्नु हुन्छ । मैले अगाडि दिएको तरिका भन्दा यो भिन्दै छ । यो तरिका बाट भिडियो डाउनलोड गर्न न कुनै software को आवश्यकता पर्छ न कुनै साईट नै खोली राख्नु पर्छ । तपाईंहरु youtube का भिडियो डाउनलोड नभएर दिक्क मानी रहनु भएको छ भने ल यो उपाय पनि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् न त है ।
भिडियो डाउनलोड गर्ने तरिका :
Posted by Bijay Mishra at 9:55:00 AM Labels: Miscellaneous - Tips n Tricks